Avianca wepụtara ọrụ na-enweghị nkwụsị site na Munich ruo Bogotá
Home » Akụkọ ụgbọ elu » Avianca wepụtara ọrụ na-enweghị nkwụsị site na Munich ruo Bogotá
South America dị nso na Munich. Na-eme nnukwu emume na nnukwu ejiji, ọdụ ụgbọ elu Munich gosipụtara akara ngosi nke ọhụụ ọhụrụ nke Avianca na Bogotá site na emume ịkpụ akara ọdịnala. Ugbu a Munich bụ naanị ebe njedebe German nke ndị na-ebu Colombia na-akwụsị akwụsị. Ndị bịara mmemme ahụ bụ Hernán Rincón, onye isi oche Avianca, yana Dr. Michael Kerkloh, Onye isi ala na onye isi nke ọdụ ụgbọ elu Munich.
“Obi dị anyị ụtọ na Avianca ahọrọla Munich. Kgbọ elu ahụ asọpụrụ dịka onye kachasị mma na South America ga-agbada ugbu a n'ọdụ ụgbọ elu kacha mma na Europe, "ka Dr. Kerkloh kwuru.
Hernán Rincón, onye isi oche Avianca na Onye isi oche nke Avianca Holdings SA kwukwara, sị: “Anyị nwere obi ụtọ ịnye ndị njem a ọrụ a ma gbasaa usoro ọrụ anyị. Site na mgbakwunye nke Munich, ugbu a anyị na-efega ebe 110 na mba 27. ”
Avianca ga-ahapụ Munich gawa isi obodo Colombia ugboro ise kwa izu. Ndị njem na-efe Bogotá ga-erite uru site n'ọtụtụ ụgbọ elu na-ejikọ ụgbọ njem na ebe ndị mara mma na Latin America nke otu onye otu Star Alliance Avianca nyere n'ụlọ ya. Tinyere obodo Colombia iri abụọ, Avianca na-efega obodo 20 ọzọ na Latin America, gụnyere ọtụtụ na Mexico, Caribbean na gafee kọntinent South America.
Avianca bụ ụgbọ elu ụgbọ elu ụwa nke abụọ kacha ochie. Ọ ga-eje ozi na ụzọ Munich na ọgbara ọhụrụ, mbara igwe Boeing 787-800 Dreamliner.
CITE 2018 nabatara onye mmeghe maka EU-China Tourism Year